संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्बजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्छ-डा. देवकोटा — Imandarmedia.com
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटक–पटक संसद विघटन गरेर संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजिनकरुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको समेत बताएका छन् । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पनि बेइमानी हुने बताएका छन् ।